Vaovao - manondrana sy manafatra
Karazana antontan-taratasy 3 no ilaina rehefa manondrana sy manafatra entana iraisam-pirenena tokony ho fantatrao
Inona ny antontan-taratasy ilaina rehefa manondrana sy manafatra entana rehefa mivoatra mafy ny toekarena. Mihamatanjaka ny hetsika fandraharahana manafatra sy manondrana, noho izany ny fahazoana fahazoan-dàlana manafatra sy manondrana dia mitaky haingana sy manangona fotoana.
Ny lahatsoratra manaraka Bridge Style dia hanome fampahalalana fototra ho an'ny fanovozan-kevitra sy ny fahitana anao izao
1. Ny antontan-taratasy ilaina dia ilaina rehefa manondrana sy manafatra
Ireo dia antontan-taratasy fanafarana sy fanondranana izay saika tsy maintsy atao amin'ny entana rehetra.
Fifanarahana ara-barotra (fifanarahana fivarotana): dia fifanarahana an-tsoratra misy eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra miaraka amin'ny antoko mifandraika amin'ny fananganana, fanovana na famaranana ny zony sy ny adidy amin'ny hetsika ara-barotra. . Ao amin'ity antontan-taratasy ity dia hisy atiny mifandraika amin'ny mpividy, mpivarotra, fampahalalana momba ny entana, ny fepetra fandefasana, ny fandoavam-bola,…
Ny faktiora ara-barotra (faktiora ara-barotra): dia antontan-taratasy navoakan'ny mpanondrana mba hanangonana vola amin'ny mpividy ho an'ny entana amidy ambanin'ny fifanarahana fifanarahana. Amin'ny ankapobeny, ny faktiora dia hanana ny atiny lehibe amin'ny: isa, datin'ny faktiora; Anarana sy adiresin'ny mpivarotra sy ny mpividy; Fampahalalana entana toy ny famaritana, habetsahana, vidin'ny singa, habetsahana; Fepetra fanaterana; Fepetra fandoavana; Seranan-tsambo fampidinana sy famoahana entana; Anaran'ny sambo, laharana fitsangatsanganana.
Lisitry ny fonosana: dia taratasy mampiseho ny famaritana entana amin'ny entana. Mampiseho ny isan'ny bales amin'ny fandefasana azy, ny lanjany sy ny lanjany,…
Bill of Lading: dia ny taratasy mpitatitra entana namboarin'ilay mpitatitra, nosoniavina ary natolotra ny mpandefa azy. Amin'izay dia manamafy ny mpitatitra fa handray entana maromaro ho an'ny fitaterana an-dranomasina sy ny fandraisana andraikitra hanaterana ny entana any amin'ilay entana araka ny nanolorany tena.
Fanambarana ny fadin-tseranana: dia ny antontan-taratasy izay mila ambaran'ny mpanafatra sy mpanondrana amin'ny antsipiriany momba ny fampahalalana, habetsahana ary ny famaritana ireo entana aondrana sy nafarana. Ity dia antontan-taratasy ilaina hanambarana ny entana manafatra sy manondrana any amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fadin-tseranana mba hahafahan'ny entana azo aondrana - manafatra any amin'ny firenena.
2. Tsy ilaina ny antontan-taratasy raha te hanondrana sy manafatra (raha eny, tsara kokoa)
Ireo antontan-taratasy ireo dia mety iharan'ny fifanarahana ara-barotra na tsia.
Proforma Invoice (Proforma Invoice): dia antontan-taratasy mampiseho ny fanamafisan'ny mpivarotra ny fandefasana sy ny vola aloa amin'ny mpividy amin'ny vidiny manokana.
Letter of Credit: dia taratasy navoakan'ny banky noho ny fangatahan'ny mpanafatra, manolo-tena amin'ny mpivarotra mba handoa vola iray, ao anatin'ny fe-potoana iray, raha toa ka manome antontan-taratasy manan-kery ilay mpanondrana.
Taratasy fiantohana (Taratasy fiantohana): dia antontan-taratasy navoakan'ny orinasam-piantohana ho an'ilay olona niantohana hanamarinana ny fifanarahana fiantohana sy hanitsiana ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo. Amin'izay ny fikambanana fiantohana dia mahazo onitra raha misy fatiantoka noho ny risika nifanarahan'ny roa tonta tamin'ny fifanarahana fiantohana. Ho fanampin'izay, ny toky dia tsy maintsy mandoa vola iray antsoina hoe premium.
Certificate of origin (Certificate of Origin): dia antontan-taratasy milaza ny niandohan'ny entana novokarina tany amin'ny faritany na firenena. Ity karazana antontan-taratasy ity dia tena manan-danja ihany koa satria manampy ny tompony hankafy famporisihana hetra manokana na fiatoan-ketra.
Taratasy fanamarinana Phytosanitary (Certificate Phytosanitary): dia taratasy fanamarinana navoakan'ny maso ivoho quarantine hanamafisana fa efa nohamarinina ny entana nafarana sy manondrana. Ny Quarantine dia natao hanakanana ny fisorohana ireo otrikaretina entam-barotra tsy handeha amin'ny firenena iray.
3. Antontan-taratasy hafa:
Taratasy fanamarinana kalitao (Certificate of Quality)
Fanamarinana fanamarinana (Certificate of Analysis)
Taratasy fanadiovana (mari-pahaizana momba ny fahadiovana)
Taratasy fanamarihana famonoana otrikaretina (Certificate Fumigation).
Bridge Style manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana Serivisy fanamboarana sy / fanondranana hanampiana anao amin'ny fanomanana antontan-taratasy ilaina amin'ny entana ampidirina sy aondrana. Mifandraisa aminay mba hahamety kokoa sy haingana kokoa ny asanao.
Fotoana fandefasana: Jul-08-2021